China Drive In leposi Ukwenziwa kunye Factory | Huade
Ukuqhuba ngee-racks kwenza ukusetyenziswa okuphezulu kwendawo ethe tyaba kunye ethe nkqo ngokususa iivenkile zomsebenzi weelori ze-forklift phakathi kweeracks, ii-forklifts zingena kwimizila yokugcina i-drive-in racks ukugcina kunye nokufumana iipelethi. Ke ngoko iivensi ezisebenzayo ziyasuswa ukugcina indawo enkulu ekhoyo. Le nkqubo ihambelana nemeko apho ukusetyenziswa kwesithuba kubaluleke ngakumbi kunokhetho lweemveliso ezigciniweyo, kufanelekile ukugcina inani elikhulu lempahla ehambelana nepallet, ngamanye amagama, inani elikhulu lezinto ezifanayo.
Iiphalethi ezilayishiwe zibekwe nganye nganye kwiithayile zendlela ezimbini, okukhokelela kulandelelwano olusisigxina lokuqokelela nokukhetha, zimbini iintlobo zeeracks, ukuqhuba nokuqhuba.
I-forklift inokuqhuba kuphela kwicala elinye lendlela yokurhabaxa, ipallet yokugqibela kuyo yipallet yokuqala. Olu hlobo lwe-rack ngumbono wokugcina izinto ngengeniso ephantsi.
Qhuba ngokusebenzisa i-rack
I-forklift inokuqhuba macala omabini endlela yokurhabaxa (ngaphambili nangasemva), ipallet yokuqala kuyo yipallet yokuqala. Olu hlobo lwerack lusetyenziswa kakuhle kugcino lwenzuzo ephezulu.
Kuba i-forklift iqhuba kwi-racking lane, anti-ungqubano kufuneka ithathelwe ingqalelo kuyilo lwesisombululo, ihlala iijantshi zomhlaba zibandakanyiwe ukukhusela izinto eziphakamileyo kunye nokukhokela iilori ze-forklift, iindawo eziphakamileyo zipeyintwe ngokubonakala okuphezulu, kunye neephalethi ezinombala oqaqambileyo Ziyacetyiswa ukuba zincede abaqhubi babeke kwaye bafumane iipelethi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Khulisa ukusetyenziswa kwendawo yomgangatho
Susa iindlela zokuhamba ezingafunekiyo
Ukwandiswa ngokulula kuguqulelo oluphezulu
Ogqibeleleyo inani elikhulu iimveliso kunye ezahlukeneyo ezimbalwa
I-FIFO / LIFO yokukhetha, efanelekileyo yokugcina indawo yonyaka
Ukugcinwa okukhuselekileyo nokugudileyo kweempahla ezibuthathaka
Isetyenziswa rhoqo kugcino olubandayo ngenxa yokusetyenziswa kakhulu kwendawo yokugcina iindleko zolawulo lobushushu
Egqithileyo Ibhokisi Flack leposi